Soo dejisan ES File Explorer 4.0.4.7 – Vessoft
AndroidNidaamkaMaaraynta faylkaES File Explorer
Bogga rasmiga ah: ES File Explorer
ES File Explorer – aalad MFT si ay u maareeyaan faylasha iyo software. Muuqaaladan ugu weyn ee software-ka waxaa ka mid ah: nuqul, cut, magaca, gurmad, shaqo la kaydka, raadi files, iwm ES faylka Explorer ka kooban module gaar ah loogu talagalay in lagu iskaan cadadka guud ee xasuusta iyo tayadoodii hawlgalka. Sidoo kale software kuu ogolaanaya in aad dami geeddi socodka orodka ama codsiyada, la tifaftirayaasha text dhisay-in iyo FPT-macmiilka shaqeeyaan. ES faylka Explorer macaamila storages daruur ugu caansan ay ka mid yihiin DropBox, Google Drive, SugarSync iyo OneDrive.
Koobiyeynta, tirka iyo dhaqaaqin of files
La shaqee kaydka
Nadiifiyaa xasuusta qalabka
Maareynta codsiyada lagu rakibay
Soo dejisan ES File Explorer
Faallo ku saabsan ES File Explorer
ES File Explorer Xirfadaha la xiriira